Mpamily mpamily vonjimaika feno herinaratra any China - mpamatsy mpanamboatra - Shenzhen Dengfeng Power Co., Ltd.
an-trano > Driver mpamily vonjy taitra LED feno herinaratra
Ity maodely ity dia afaka mifanandrify amin'ny voltita fidirana avy amin'ny 90V ka hatramin'ny 280V, ary ny famoahana ankehitriny dia mandeha amin'ny alàlan'ny mpamily Led, ka mahatonga ny jiro LED jiro feno herinaratra azonao rehefa tsy fahombiazan'ny herinaratra. Ny DF168N dia mampiasa circuit cir......
Kitapo herinaratra mahery setra LED Max25w - DF168H
DF168H Fanasongadinana manokana Manasongadina â— ‡ Ity kit ity dia mifanaraka amin'ny maodelin'ny LED rehetra misy 24w be indrindra ary manana fampisehoana azo antoka. Famaritana ny vokatra DF168H maodelim-pahazavana jiro dia natao hanovana ny jiro LED 10w ~ 25w isan-karazany, ny fanaovan-jiro dia m......
DF518H Fanasongadinana manokana Manasongadina â— ‡ Ity kit ity dia mampiasa IC marani-tsaina avo lenta mba hifehezana ny fizaran-tany, ary manolotra fitiliana tena, fitsapana isam-bolana ary fanao isan-taona. â— ‡ DF518H dia manana fiarovana bateria lithium roa, misoroka ny fihoaram-pefy amin'ny bat......
4.LED 36w ~ 60w Mahery vaika fonosanaâ € ”DF518H50
DF518H50 Fanasongadinana manokana Manasongadina â— ‡ Ity kit ity dia mampiasa IC marani-tsaina avo lenta hifehezana ny fizaran-tany, ary manolotra fitiliana tena, fisedrana isam-bolana ary fanao isan-taona. â— ‡ DF518H50 dia manana fiarovana fiarovana bateria lithium roa, misoroka ny fihoaram-pefy a......
DF518H100 Fanasongadinana manokana Manasongadina â— ‡ Ity kit ity dia mampiasa IC marani-tsaina avo lenta hifehezana ny fizaran-tany, ary manolotra fitiliana tena, fisedrana isam-bolana ary fanao fisedrana isan-taona. â— ‡ DF518H100 afaka manolotra temp miasa tsara. vahaolana fitantanana sy fitorian......